Faa'iidada Shaaha Cagaaran (Green Tea) - Cishqi.com
Faa’iidada Shaaha Cagaaran (Green Tea)
Mogadishu (Cishqi) – Waa maxay faa’iidada shaaha cagaaran (green tea)? Muxuu faa’iido u leeyahay shaaha cagaaran dhanka caafimaadka? Jawaabta waa mid fudud. Markad aad bilaawdo cabista shaaha cagaaran waxaad caafimaadkaaga ka dareemi doonto waxyaabo badan oo aan halkaan ku xusi doono. Faa’iidada shaaha cagaaran ee afka qalaad lagu yiraahdo green tea dad badan oo inaga mid ah waxba kama ogo, waana sababta keentay in aan halkaan ugu faa’iideyno.
1. Shaaha cagaaran (green tea) iyo caafimaadka guud
2. Soomaalida iyo shaaha cagaaran
3. Shaaha cagaaran wuxuu kaa saacidayaa dhimista miisaanka
4. Yareynta ilawga iyo Gariirka
5. Waxa uu ka hortagaa burooyinka kansarka ah
6. Shaaha Cagaaran waxa uu afka ka kaxeeyaa urta
7. Wuxuu la dagaalama cudurka Caabuqa/ Infekshanka
8. Wuxuu kaa caawinayaa ka hortaga macaanka
9. Caafimaadka Wadnaha ayuu sara u qaadaa
10. Talada caafimaadka
Shaaha cagaaran waxa uu maskaxda ka ilaaliyaa asaasaq iyo guud ahaan calaamadaha gabowga.Hadaad rabto in aad u ekaato 20 jir deeqsan ah oo jalaqsan, badso cabida shaaha cagaaran. Haddii aan nahay Soomaali, runtii wey nagu yartahay cabista shaaha cagaaran mana garaneyno faaiidadiisa. Marka laga soo tago faa’iidada shaaha cagaaran waxaa inoo sii dheer marka aan shaah cabeyno in aan isticmaalno sokor aad u fara badan, taasoo aanan u fiicaneyn caafimaadka guud.
Waxaa inta badan la sheegaa in dadka ugu badan ee Soomaalida ah ee isticmaalo shaaha cagaaran in ay yihiin Soomaalida ku nool qurbaha gaar ahaan Soomaalida Minnesota. Tolow Farxiyo Kabayare iyo Hodan Cabdiraxmaan maka mid yihiin?
Dhanka kale shaaha cagaaran aad loogama isticmaalo dalkeena Somalia, maxaa yeelay dadka inta badan uma lahan wax dhadhan ah, waana sababta ay ku doorbidaan cabista caleenta shaaha madow.
Shaaha cagaaran waxaa ku jiro maaddooyin awood u leh in ay gaaraan maskaxda oo ay ka hortagaan in barootiinta dhibaatada ku keenysaa ay ku uruurto, waana sababta ay culimada saynisku u sheegayaan in Shaaha Cagaaran uu ka hortag u yahay isku-dhex daadashada maskaxda iyo in xusuustu ay yaraato, sidoo kale waxaa ku jira maaddo afka cilmiga lagu yiraahdo EGCG oo yareysa mid ka midah xanuunnada ugu khatarsan ee dumarka ku dhaca , kaasoo ah lafo-burburka. Intaas waxaa sii dheer sida daraasadaha cusub sheegayaan in shaaha cagaaran oo yareeya gabowga maqaarka, kana ilaaliya raadka khatarta ah ee kaga iman kara fallaaraha qorraxda.
Guurka Wanaagsan: Baro 16 Talo Oo Muhiim Kuu Ah(Opens in a new browser tab)
Haddii aad tahay qof cayilan oo cayilka ka batay, midana aad dooneyso waxyaabaha miisaanka yareeya ama sida cayilka loo dhimo, shaaha cagaaran aad buu kuu anfacayaa. Haddii aad sidoo kale raadineyso waxyaabaha lagu cayilo, shaaha caraan miisaan uun buu kaa dhimayaa ee kuguma siyaadinayo. Faa’iidada shaaha cagaaran, waxauu gubaa dufanka iyo xaydha jidhka ku ururta, waxa uu dhimaa doonista cuntada, calashaan wuuu kaa xirayaa amateedka, baahi fara badan kuma qabaneyso, taasina waxa ay kuu suurto galineysaa in aad qaadato kalooriinka laguugu talo galay in ka yar, arrimahaas oo dhammaantood ka qayb qaata dhimista miisaanka.
Shaaha cagaaran ayaa qeyb weyn ka qaata inuu hormariyo shaqada maskada, waxaa kale oo uu ka hortagaa in ay gabawdo. Alzheimer’s waa xanuun waxyeeleeya neerfayaasha waxaanu badanaa ku dhaca dadka, xanuunka oo keena dementia.
Parkinson’s xanuunkan ayaa ah kan labaad ee ugu badan dunida kuna dhaca neerfayaasha waxa lala xidhiidhiyaa inuu dilo unugyada soo saara dopamine ee maskaxda.
Cilmibaadhisaha ugu waaweyn ee lagu sameeyey shaaha cagaarani waxa ay isku waafaqsan yihiin in uu yareeyo heerka khatarta ah in qofka uu ku dhaco cudurka kansarka.
In kasta oo ay jiraan saynisyahanno kale oo iyagu dood ka qaba in uu shaaha cagaarani awooddaas inta le’eg leeyahay, haddana sida lagu ogaaday daraasad soo baxday sannadkii 2015 ka, waxa ay khubarada sayniska badankoodu aaminsan yihiin in shaahacagaarani uu yareeyo suurtogalnimada in qofka kansar ku dhaco, maadaama oo uu la dagaalamo koritaanka xidhmooyika iyo wasladaha kansarka, haddii ay qofka hayaanna u u diido in ay jidhka ku faafaan.
Shaaha cagaaran waxa uu gaar u leeyahay awood dili karta dhammaan bakteeriyada afka ku dhalata, sidaa awgeed waxa uu ka hortagaa in ilkaha uu ku samaysmo lakabka dhagaxa ah, waxa uuna kor u qaadaa caafimaadka cirridka.
Sida lagu sheegay daraasado xidhiidh ah waxaa uu shaaha cagaran uu la dagaalamo bakateriyooyinka qaar, gaar ahaana kuwa afka ku dhasha sida sterptoccocus mutans iyo qeyb ka mid ah viruska keena Durayga/Hargabka ee influenza virus.
Waxa uu ka caawiyaa ganaca inuu soo saaro insulin ku filan isaga fudeydiya in xadiga sonkorta ah ee dhiiga la dhimo. 48% japan.
Shaaha cagaaran waxa uu sara u qaadaaa caafimaadka wadnaha, waxa uuna difaaaa xanuunada ku dhaca wadnaha, waxa uu sidoo kale shaaha cagaaran hoos u dhigaa duxda dhiiga sida cholesterol sha.
Hadaba badso shaaha cagaaran, si uu caafimaadkaaga u noqdo mid wanaagsan. Xusuusnow caafimaadka waa sheey qaali ah, waana wax aan la iibsan karin balse waa lagu dadaali karaa. Haddii aad maanta bilaawdo cabista shaaha cagaaran, waxaa suurto gal ah in aad noloshaada ku dhameysto nolol caafimaad leh, waana tan qof walbaa uu rajeeyo.
Waxaan rajeyneynaa in aan wax badan kuu faa’iideynay, la wadaag asxaabta oo nagu caawi in aad sii faafiso, si walaalahaaga Soomaaliyeed aad wanaaga u gaarsiiso. Annaguna waxa ay inoo tahay dhiiri galin. Mahadsanid!!!